भारत नेपाललाई सिक्किम बनाउने योजनामा छ – eratokhabar
ई-रातो खबर २०७३, २ पुस शनिबार ०८:०२ December 17, 2016 1286 Views
(मोहनविक्रम सिंह नेपाली राजनीतिमा परिचय गराइरहनुपर्ने नाम होइन । तीसको दशकमा उनलाई नेपालको माओ भनेर चर्चा गरिन्थ्यो । नेपालमा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने कारखानाका रूपमा रहेका हाल नेकपा (मसाल) का महामन्त्री क. मोहनविक्रम सिंह ८२ वर्षको उमेरमा पनि उत्तिकै क्रियाशील छन् । रातो खबर साप्ताहिकका लागि रामशरण न्यौपाने र चिन्तामणि घिमिरेको सहयोगमा अनिल शर्माद्वारा गरिएको वार्ताको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरिएको छ– रातो खबर)
कमरेड, सन्चै हुनुहुन्छ ? दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ ?
मेरो स्वास्थ्य सामान्यतः ठिकै छ । मधुमेह रोगको समस्या छ । अरू ठिकै छ । बिहान ४ बजे उठ्छु । काठमाडौँ भएको समयमा योगा गर्छु । अध्ययन र लेखन गर्छु । दिउँसो पार्टीको काम गर्छु ।
म खानपान एवम् स्वास्थ्यप्रति अनुशासन पालन गर्छु । विद्यार्थी जीवनकालदेखि नै म स्वास्थ्यप्रति सचेत थिएँ । अहिले पनि त्यो जारी छ । अर्को कुरा, क्रान्ति र परिवर्तनप्रति आशावादी, सक्रिय र जुझारु हुँदै आएँ । यी दुई कारणले गर्दा यो उमेरमा पनि म क्रियाशील हुन सकेको छु । अरू खास रहस्य केही छैन । स्वास्थ्यले विचारमा प्रभाव पार्छ; दृढ विचार र मनोबलले स्वास्थ्यमा पनि धेरै हदसम्म प्रभाव पार्छ । यसको द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध हुन्छ । यसकारण मेरो स्वास्थ्य ठिकै छ ।
हेर्नुस्, देशमा एकपछि अर्काे नयाँनयाँ समस्याहरू आएका छन् । सङ्कट थपिएका छन् । संविधानसभाको चुनावताका त्यस्तै भयो । पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाइकन विघटन भयो । अहिले संविधान त बन्यो तर हामी त्यसप्रति पूर्ण सन्तुष्ट छैनौँ । बुर्जुवा दृष्टिकोणले पनि जुन प्रकारको संविधान बन्नुपथ्र्याे, त्यस्तो बनेको छैन । तैपनि जेजति उपलब्धि भएका छन् त्यसप्रति हाम्रो समर्थन छ । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, महिला, दलितअधिकारजस्ता कतिपय मुद्दाका लागि हामीले लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका थियौँ । ती कतिपय प्रश्नहरू संविधानमा समावेश छन् । संविधान लागू भएन भने देश झन् भयानक प्रतिगमनतिर जान्छ । त्यसकारण संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ । तर भारतले आफ्नो अनुकूलमा संशोधन गर्न दबाव दिइरहेको छ । त्यसकै लागि नाकाबन्दी लगायो । नाका खोल्न दिएन । त्यसप्रति ओली सरकारले लिएको अडान सही छ । त्यही कारण भारतले ओली सरकार विघटन गराउन भूमिका निर्वाह ग¥यो । भारतको त्यही उद्देश्य पूरा गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव आएको छ । यद्यपि संशोधन प्रस्तावमा भारतको अपेक्षा पूरै पूरा भएको छैन । पहाड र तराईलाई अलग गर्ने, तराई भारतमा गाभ्ने र घेराबन्दी गरेर कालान्तरमा पहाडलाई समेत सिक्किम बनाउने रणनीतिमा भारत छ । भारतको त्यही रणनीति पूरा गर्नका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव आएको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूमा ठूलो कमजोरी छ । यति ठूलो समस्या भएको छ तर उनीहरू यसलाई सामान्य प्रकारको समस्या ठान्छन् । उनीहरू दूरदृष्टि होइन भारतको स्वार्थमा काम गर्ने र आफ्नो स्वार्थमा तल्लीन भैरहेका छन् । गणतन्त्र ल्याउन र भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध लड्नमा माओवादी जनयुद्धको ठूलो भूमिका छ तर त्यसको एउटा हिस्सा भारतको स्वार्थ पूरा गर्न लागिरहेको छ । यो समस्या ६ दशकदेखि पैदा भएको हो । भारतीय गृहमन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेलको कालदेखि पैदा भएको हो । त्यसका विरुद्ध लडेर खण्डित रूपमै भए पनि राष्ट्रियता बचाउन सफल भएका छौँ । हामी एकजुट भएर सङ्घर्ष ग¥यौँ भने देशलाई सङ्कटबाट बचाउन सक्छौँ ।
एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशाका विषयमा यहाँको दृष्टिकोण कस्तो होला ?
रातो खबर साप्ताहिकमार्फत थप केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
अहिले राष्ट्रियतामाथि सङ्कट पैदा भएको छ । देशमा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति पैदा भएको छ । मधेसीहरूको कारणले, भारतको कारणले समस्या आएको छ । राष्ट्रियता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामा गम्भीर समस्या आएको छ । भारत सम्पूर्ण नेपाल नखाँदासम्म चुप लागेर बस्दैन । देश बचाउन हाम्रा मतभेदहरू थाती राखेर एकताबद्ध भएर जानुपर्छ । यसका लागि जनमत निर्माण गर्ने भूमिका तपाईंको रातो खबर साप्ताहिकले पनि भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु ।